न्युयोर्कमा कवि कृसु क्षेत्रीको ‘चराको गीत’ लोकार्पण – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१४ कार्तिक २०७७, शुक्रबार ०७:४३ English
न्युयोर्कमा कवि कृसु क्षेत्रीको ‘चराको गीत’ लोकार्पण
मनोज रिजाल, न्युयोर्क । आधुनिक पुस्ताका चर्चित कवि कृसु क्षेत्रीको नवीनतम कृति ‘चराको गीत’ एक जीवन्त समारोहका बीच संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्क सहरमा अगस्ट २५, २०१८ (भाद्र ९, २०७४) मा लोकार्पण गरिएको छ ।
क्वीन्स्को ज्याक्सन हाइट्समा अवस्थित जुइस (यहुदी) सेन्टरमा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्य अमेरिकाका लागि नेपाली राजदुत डा. अर्जुन कुमार कार्कीले गर्नु भएको थियो । उक्त समारोहलाई संबोधन गर्दै प्रमुख अतिथि डा. कार्कीले कृसु क्षेत्रीको नवीनतम कृतिले नेपाली वाङमयमा थप योगदान पु¥याएको बताउनु भयो ।
‘म आफैं एक कवि नभएता पनि कविता लेखनको नेपाली साहित्यमा के कति महत्व छ भन्ने तथ्य मैले बुझेको छु । यो कृतिले एक कुटनीतिज्ञको कवित्वलाई बाहिर ल्याएको छ र मैले पनि वहाँको कवित्वलाई बुझ्ने मौका पाएको छु,’ राजदुत डा. कार्कीले भन्नुभयो ।
यसैगरी, कवि कृसु क्षेत्रीले आफ्ना विभिन्न नियमित कार्यहरु छँदाछँदै पनि सबै कार्यहरु छाडेर यो कृतिलाई प्रकाशित गर्न आफु लागि परेको स्मरण सुनाउनु भयो ।
‘मैले साझा प्रकाशनलाई पुस्तक प्रकाशन संबन्धी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेता पनि समयमै यस पुस्तकमा काम गर्न सकिरहेको थिइनँ । तर सबै काम छोडेर यसमै तल्लिन हुनु पर्ने अवस्था आयो । यस कार्यमा मलाइ सहयोग गर्नु हुने मेरो परिवार, सहकर्मी लगायत सम्पुर्ण मित्रजनहरुलाई हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु,’ क्षेत्रीले भन्नुभयो ।
कवि क्षेत्रीले उक्त समारोहमा ‘चराको गीत’ मा समेटिएका आफ्ना केही कविताहरु समेत वाचन गर्नुभएको थियो । ती कविताहरुले परदेशमा नेपालीहरुको दशैं, भुईंचालो पछिको नेपाल र नेपालीको अवस्था, जीवनमा बुवा अनि आमाको महत्व लगायतका विषयहरु समेटेका थिए ।
उक्त कार्यक्रमको सभापतित्व जर्सी सिटीका मेयरका सल्लाहकार एवम् सामाजिक अभियन्ता डा. विष्णुमाया परियारले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमलाई संबोधन गर्दै डा. परियारले कृसु क्षेत्रीको कविता संग्रहले नेपाली साहित्यको उत्थान गर्न सबैलाई उत्प्रेरणा दिइरहने तथ्य बताउनुभयो ।
कार्यक्रमको संचालन युएसनेपाल अनलाइनका प्रधान सम्पादक प्रदीप परियार थापाले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमको लाइभ प्रसारण युएसनेपाल अनलाइन, इ–नेपालीज लगायतका मिडियाले गरेका थिए ।
कवि क्षेत्रीको ‘चराको गीत’ साझा प्रकाशनले २०७४ मा प्रकाशित गरेको हो, जसमा विलयन लेखनका समेत गरी ४२ वटा समसामयिक कविताहरु समेटिएका छन् । कवि क्षेत्रीले १० वर्षको अन्तरालमा आफ्नो दोस्रो कृति प्रकाशित गर्नुभएको हो ।
११ भाद्र २०७५, सोमबार ०५:५१ मा प्रकाशित